AbeBlitzbokke bafuna ukuqeda amaphutha - Bayede News
UPHILIP Snyman ongukaputeni weqembu lesizwe lakuleli amaSpringbok Seven, uthi amaphutha abawenze eNew Zealand ngeledlule abazimisele ukuwaphinda emidlalweni yeSydney Sevens ezobanjelwa e-Australia kule mpelasonto.
Leli qembu elicijwa uNeil Powell kusukela ivuliwe isizini yangowezi-2018/19 yeHSBC World Rugby Series alikaze linqobe nowodwa umqhudelwano. Ngeledlule eNew Zealand lihluleke lancama laphuma endaweni yesine lathola amaphuzu ali-15. Izwe elinqobile yiFiji Sevens okuyiyo ekleliswe phezulu ebhaxabule i-United States of America (USA) Sevens ngamaphuzu angama-38 eqandeni. Ngokuthola amaphuzu ali-15 elakuleli linyukele endaweni yesine laba namaphuzu angama-44, iFiji ne-USA bayalingana ngamaphuzu angama-57. IBlitzbokke ihlulwe iFiji kowandulela owamanqamu ngamaphuzu angama-27 kwayisi-7.
“Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uwuphathe umdlalo ekugcineni imiphumela ingabi mihle. Kusukela iqalile isizini senza kahle kuyona yonke imidlalo kodwa sihluliswe ngamaphutha ethu. Konke okusenze sanganqoba emiqhudelwaneni edlule ngicabanga ukuthi sikulungisile. Sekuyiskhathi sokuthi sitshengise ukuthi isicoco asisinqobanga ngephutha ngesizini edlule,” kusho uSnyman.
Elakuleli ngesizini edlule lihlulwe i-Australia Sevens kowamanqamu kuyona iSydney Sevens kanti ngeyangowezi-2016/17 ilona futhi elakuleli elanqoba libhaxabula i-England Sevens ngamaphuzu angama-29 kwali-14.
Uma ezikaPowell zingaqeda zibalwa namaqembu amane aphezulu lokho kobe kusho ukuthi sizolibona ligijima eJapan kumaSummer Olympics azoba ngowezi-2020.
UPowell ephawula uthe: “Kule mpelasonto akukho esikudingayo ngaphandle kokunqoba ukuze sibuyele endaweni yethu. IFiji ne-USA njengoba bephezulu akukhona ukuthi bayasihlula kodwa ithina esizenzela phansi. Sizozama ukuthi sinyuse izinga lokudlala,” kuphetha uPowell.
AmaBlitzbokke aseqoqweni D lapho eqhathwe khona ne- Argentina Sevens ekleliswe endaweni yesi-9 ngamaphuzu angama-23, i-Australia Sevens esendaweni yesine ngama-35 bese kuba iTonga Sevens esendaweni ye-16 ngamaphuzu amathathu.
Umdlali okulindeleke ukuthi atakule elakuleli uJustin Gedud okunguyena ngesizini edlule e-Australia owavalela phakathi amaphuzu angama-56.
nguQhelani Msweli Jan 31, 2019